लाखौं सलाम यी मानवताको खानि ट्राफिकलाई ! सम्मान स्वरूप एक लाईक र सेर गरौं। – Taja Khawar
लाखौं सलाम यी मानवताको खानि ट्राफिकलाई ! सम्मान स्वरूप एक लाईक र सेर गरौं।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख १६, २०७९ समय: २०:५३:२९
साउथका सुपरस्टार यशको फिल्म केजीएफ २ ले अहिले बक्स अफिसमा धमाकेदार कमाई गरिरहेको छ । केजीएफ च्याप्टर १ कत्तिको धमाकेदार थियो भन्नै पर्दैन। पक्कै पनि तपाईंले यो फिल्म हेर्नुभएको होला र यसमा यशको रकिंग लुक तपाईंलाई मन परेको हुनुपर्छ। जुन समयमा यो फिल्म रिलिज भएको थियो, यो फिल्मले कमाई देखि हरेक मामिलामा धेरै रेकर्ड तोडेको थियो ।
आज केजीएफ २ मा यस्तै केहि देख्न सकिन्छ। फिल्मले दिन प्रतिदिन नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ । त्यसैले एउटै फिल्मका सबै पात्र चर्चाको विषय बनेका छन् । लामो समयदेखि यशको तुलना सलमान खान र शाहरुख खानसँग भइरहेको थियो । त्यसैले अब यशले बलिउडका ठूला स्टारसँगको तुलनामा आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
बलिउड लाइफलाई दिएको अन्तर्वार्तामा यशले भने,– म सिनेमाको बच्चा हुँ । म उनका चलचित्र हेरेर हुर्किएँ । म यो पनि भन्न चाहन्छु कि यहाँ केहि पनि स्थायी छैन। उनीहरु सुपरस्टार हुन् र उनीहरुको अनादर र तुलना गर्नु गलत हो । यी दुवै मेरो अभिनेता बन्ने प्रेरणा हुन् । दुवै उद्योगका आधारस्तम्भ हुन् । केजीएफ २ कसरी प्यान इन्डियामा सफल भयो भन्ने बारे विस्तार गर्दै, उनले भने –ूयो यस्तो योजना थियो। हामी एक अखिल भारतीय फिल्म बनाउन चाहन्थ्यौं र म चाहन्छु कि हरेक फिल्म हिन्दी सिनेमा वा कन्नड सिनेमा होइन, तर सम्पूर्ण भारतमा रिलिज होस् । एसएस राजामौली सरले सुरु गर्नुभयो र हामीले जारी राख्यौं। मलाई आशा छ कि यस्तै फिल्महरु बन्नेछन्।
अन्तर्वार्तामा केजीएफको ट्रेलर सार्वजनिक गर्ने क्रममा आफ्नो भनाइको व्याख्या गर्दै यशले भनेका थिए– ‘मानिसहरू मनोरञ्जन चाहन्छन् र देशको जुनसुकै भागबाट पनि यसलाई स्वीकार गर्न तयार छन् । आज भारतीयहरूले स्पेनिश सामग्री र अन्य धेरै भाषाहरूमा उपभोग गरिरहेका छन्। मलाई लाग्छ कि यी विभाजनहरू र वुड्स मोनिकरमा आधारित वर्गीकरणहरू उद्योगका मानिसहरूको दिमागमा छन्। दर्शक अघि बढेका छन् । दर्शकको हैसियतमा, मलाई कुनै फरक पर्दैन कि यो हिन्दी, तमिल फिल्म होस् वा तेलुगु फिल्म। मलाई विश्वास छ कि हामी सबै एक उद्योग हौं र हामीले विभिन्न वुड्स शीर्षकहरू प्रयोग गर्न बन्द गर्नुपर्छ।
यशले आफ्नो करियर सन् २००७ मा फिल्म ‘जम्भडा हुडुगी’ बाट सुरु गरेका थिए । यद्यपि यसमा उनी सहायक भूमिकामा देखिएका छन् । त्यसपछि उनी ‘मोगिना मनसु’मा देखिएका थिए । जसमा यश समानान्तर मुख्य भूमिकामा थिए । तर, यशले फेरि फिल्म रकीबाट मुख्य नायकको भूमिका निर्वाह गरे । यस फिल्मबाट यशले निकै चर्चा पाएका थिए । यसपछि यशले धेरै कन्नड फिल्ममा काम गरे । त्यसपछि उनी विस्तारै कन्नड सुपरस्टार बने । द्दण्ज्ञड मा यशले केजीएफ च्याप्टर १ जस्ता हिट फिल्म दिए । अहिले उनी केजीएफ २ मा देखिएका छन् ।
Last Updated on: April 29th, 2022 at 8:53 pm